Thursday February 20, 2020 - 12:02:59 in Wararka by
Shalay waxaa qeybo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose ka dhacay dagaallo ay qaadeen ciidamada Xarakada Al-Shabaab oo khasaare badan lagu gaarsiiyay askarta Dowladda Federaalka.
Dagaalka kowaad oo ku billowday weerar Nafhurnimo ah kana dhacay Ceelsaliini ayaa waxaa dowladda looga dilay 41 askari iyadoo looga gubay 4 gaari loogana furtay 2 kale oo Cabdi Bilayaal ah.
Waxaa xigay weerar dhabba gal ah oo loo dhigay ciidamo kuwaasoo ugasoo gurmanayay Muqdisho oo lagu helay inta u dhaxaysa Lafoole iyo Xaawo Cabdi kuwaasoo iyagana laga dilay 32 askari islamarkaana laga gubay 2 gaari.
Intaa waxa dheer weerar kale oo ka dhacay degmada Qoryooley oo dowladda looga dilay 5 askari Wadarta guud ee ciidamadan dhintay ayaa ah 78.
Haddaba khasaarahan badan ee la gaarsiiyay ciidanka dowladda ayaa yimid kadib markii uu dhawaan Madaxweyne Farmaajo shaaca ka qaaday in ciidanka Al-Shabaab aanay awood u lahayn dagaal toos ah oo ay ku qaadaan askartiisa.
Dadka qaar ayaa aaminsan in ciidanka faraha badan ee dhintay ay eersadeen hadalkaasi kasoo yeeray Farmaajo oo ay ku tilmaameen mid aanu ka fiirsan.
Wareysi socday muddo 47 daqiiqo ah oo isbuucii lasoo dhaafay uu Farmaajo siiyay Telefeshinka Universal ayuu ku sheegay in Al Shabaab ay gabeen marxaladdii weerarka taas bedelkeeda ciidamadiisu ay yihiin kuwa carar qaba oo Al Shabaab ka adkaaday.